Yintoni Ebukeka Palaces Aseyurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Yintoni Ebukeka Palaces Aseyurophu
Yintoni Ebukeka Palaces Aseyurophu
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe Ukuhamba ngeLuxembourg, Travel Europe
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 20/02/2020)
izixeko ezininzi EYurophu kwibhotwe elihle (okanye emibini) ukuba bazobe i abakhenkethi. Yiloo nto kunzima ukuvumelana malunga ezintlanu ezinde intle eYurophu. Makhe jonga kwi Ukukhetha kwethu The Most Beautiful baKwaZulu EYurophu:
1. Beautiful baKwaZulu eYurophu France Chateau de Versailles
Versailles mhlawumbe enye edumileyo iinqaba emhlabeni, yaye ngokuqinisekileyo sifanele igama. Ku va Likhonkco-ngenkulungwane ye-18 French art, opulent kunye zizityebi azobe ubuhle.
It yandiswa yi umlawuli odumileyo French uLouis XIV, owahamba inkundla kunye norhulumente Versailles ngo 1682. I-Chateau yaba indawo esembindini samandla Fransi de kube Revolution ngo 1789. Ngoku yenye yeendawo kubakhenkethi idumileyo ehlabathini.
2. Windsor Castle, Izikumkani Ezimanyene
Windsor i abasebenza ebhotwe kwaye uphakathi kakhulu Beautiful baKwaZulu eYurophu, inqaba endala ezinkulu ehlabathini ukuba usenayo abahlali. I-British Queen uchitha ngeempelaveki ngasese e Windsor.
Imbali Windsor Castle iphantse 1000 iminyaka elide. Ukutyhubela iinkulungwane, iye yaba ikhaya amalungu amaninzi odumileyo lobukumkani British. Le nqaba iqulathe st. WaseGeorge Chapel, indawo yokungcwaba yasebukhosini ezilishumi, kwaye Apartments State bafumana Royal ubuncwane Collection.
I-Grand Ducal Palace of Laksembheg e Luxembourg City nguye yokuhlala esemthethweni ye-Grand Duke. Usebenzisa ukuba inkoliso nemisebenzi yakhe esemthethweni, kunye ne Grand neTshawekazi laseYork bashiya. Ibhotwe kwakhona iqulethe ofisi zabo, kanye staterooms.
Esi sakhiwo yayisetyenziswa kuqala njengoko kwiholo isixeko emva kokuba kwakhiwa 1572. in 1817, saba yokuhlala esemthethweni iRhuluneli. I-Grand Ducal Palace ukhangela kutyatyamba kwi isimbo Flemish Renaissance yaye yenye sizathu kuluhlu lwethu Uninzi baKwaZulu Beautiful eYurophu. It has enye lwefacade intle kwisixeko, kwakunye ingaphakathi elihle.
4. Neuschwanstein Castle, Jemani
Neuschwanstein ufanelwe endaweni yayo phakathi iingxande intle eYurophu ngenxa yayo setting yokuchitha yaye izakhiwo omangalisayo. Le nqaba Kubonakala ngathi kwathi ngqo ngaphandle intsomi. Inyaniso, iye isetyenziswe waphefumlelwa ukuba Inqaba e Disney kaThixo Sleeping Beauty.
Yinto ngenkulungwane ye-19 Romanesque Imvuselelo komkhulu. mbali Art ehlabathini lonke akakuqondi na enye iisimboli Romanticism. King Ludwig II of BaVaria wakha Neuschwanstein njengokuba iqhele yakhe 1837. Emva kokufa loKumkani ku 1886, yaba ivulelekile kuluntu.
Ulm ukuba Fuessen Uqeqesha
Munich ukuba Fuessen Uqeqesha
Stuttgart ukuba Fuessen Uqeqesha
Nuremberg ukuba Fuessen Uqeqesha
5. Beautiful baKwaZulu eYurophu and Austria – Schloss Schonbrunn
Enye ozibonayo qho watyelela kwaye uninzi Beautiful baKwaZulu eYurophu e Vienna, Ostriya , Schonbrunn naye isiza World Cultural Heritage. Ibhotwe yaqala wokuzingela Lodge for woMlawuli Leopold I. Yakhiwa ngenkulungwane ye-17. Schonbrunn yenye yemisebenzi ilungileyo wezakhiwo Bernhard Fischer von Erlach.
Ukusukela ngoko, Schonbrunn liyababonela ukusetyenziswa njengoko inkundla kaMaria Theresa, emva koko yaba ingongoma engundoqo womkhosi imicimbi karhulumente. Yakhelwe ngendlela yobuciko, ebhotwe ubukhulu becala ugcina kwimo yaso yesiqhelo. ngezakhiwo unique kwenza enye yeendawo ezininzi ingane ukuya eYurophu.
Xa sele ukulungele ukuba ucwangcise uhambo lwakho malunga ezintlanu ezinde kakhulu zintle eYurophu, ezi iindawo awukwazi miss. Zonke ezi ndawo elifikeleleka lula nge loliwe, njalo incwadi amatikiti zakho kwaye uqale ucwangciso!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-palaces-europe%2F/%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#amazingplaces #chateua #WindsorCastle Laksembheg